Ụlọ akwụkwọ akụkọ - World March
Latin America March site na obodo
02 / 11 / 2021 08 / 10 / 2021 site Antonio Gancedo
N'isiokwu a, anyị ga -achịkọta obodo ọrụ dị iche iche emegoro n'ime usoro nke 1st Multiethnic na Multicultural Latin American March maka emeghị ihe ike. Anyị ga -ejegharị ebe a site n'akwụkwọ akụkọ edepụtara na webụsaịtị a nke mmemme obodo na -eme n'obodo. Anyị ga -ebido, dị ka obodo kwadoro ndị ọbịa
Categories Akwụkwọ akụkọ
Akwụkwọ Akụkọ World March - Afọ Ọhụrụ puru iche
01 / 01 / 2020 site Antonio Gancedo
Akwụkwọ akụkọ “Pụrụiche Afọ Ọhụrụ” a chọrọ igosi n'otu ibe akwụkwọ nchịkọta ihe omume niile emere. Kedu ụzọ kacha mma isi mee nke a karịa ịnye ohere ịnweta akwụkwọ akụkọ niile ebipụtara. Anyị ga-egosi akwụkwọ akụkọ ndị e bipụtara na 2019, nyere iwu site n'ikpeazụ ruo na nke mbụ wee chịkọta ya na ngalaba 5 nke akwụkwọ akụkọ atọ ọ bụla. Anyị na-eje ozi
Akwụkwọ akụkọ March - World 15
31 / 12 / 2019 29 / 12 / 2019 site Antonio Gancedo
Anyị na-abịa na njedebe nke afọ, ndị na-ere ahịa nọ na Argentina. N'ebe ahụ, na Punta de Vacas Study and Reflection Park, na Mendoza, ihe omume ga-emechi maka Afọ a. Anyị malitere akwụkwọ akụkọ a na ihe omume ikpeazụ n’afọ ahụ ndị njem mere na Punta de Vacas Study and Reflection Park, na Punta
Akwụkwọ akụkọ March - World 14
25 / 12 / 2019 24 / 12 / 2019 site Antonio Gancedo
Anyị na-egosi ebe a ụfọdụ ọrụ nke Marchers of International Base Team na-esonye mgbe ha na-aga njem ha na America na ụfọdụ ọrụ a na-arụ n'ọtụtụ mba. Ndị na-eme ngagharị iwe nke ụwa nke abụọ na-ezukọ na ụmụ akwụkwọ nke José Joquín Salas. A mara ọkwa nke a na
Akwụkwọ akụkọ March - World 13
29 / 12 / 2019 24 / 12 / 2019 site Antonio Gancedo
Ihe omume nke ndi otu ndi isi nke abuo nke uwa nke abuo na-aga n'ihu, na mpaghara America. Site na El Salvador ọ gara Honduras, site na ebe ahụ ruo Cota Rica. Mgbe ahụ, ọ gara Panama. A ga-egosipụta ụfọdụ ọrụ a rụrụ na ebe dị anya site na Base Team. Banyere March by Sea, anyị ga-ahụ nke ahụ
Akwụkwọ akụkọ March - World 12
21 / 11 / 2019 site Antonio Gancedo
N'ime akwụkwọ akụkọ a, anyị ga-ahụ na Ndị Isi nke 2 World March maka Udo na Nnọọ Ọchịchị erutela na America. Na Mexico, ha maliteghachiri ọrụ ha. Anyị ga-ahụ na a na-eme mmemme n'akụkụ niile nke ụwa. Na nke ahụ, n'oké osimiri, a na-aga n'etiti nsogbu na nnukwu ọysụ. Anyị ga-ahụ ụbọchị ụfọdụ nke
Akwụkwọ akụkọ March - World 11
16 / 11 / 2019 site Antonio Gancedo
Na Bulletin a anyị ga-atụle ọrụ dị na Mar de Paz Maditerranean, site na mmalite ya ruo rute Barcelona ebe enwere nzukọ na Peace Boat nke Hibakushas, ​​ndị Japan lanarịrị na Hiroshima na Nagasaki Bombs, Boat Peace Boat na Barcelona. 27 nke
Akwụkwọ akụkọ March - World 10
N'ime isiokwu ndị e gosipụtara na akwụkwọ akụkọ a, Òtù Na-ahụ Maka Ụwa Na-aga n'ihu na Africa, dị na Senegal, "Oké Osimiri Mediterenian nke Udo" na-amalite ịmalite, n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa, ihe niile na-aga n'ihu na usoro ya. . N'ime akwụkwọ akụkọ a, anyị ga-eleba anya na mmemme ndị Core Team na
Akwụkwọ akụkọ March - World 9
02 / 11 / 2019 site Antonio Gancedo
Worldbọchị nke abụọ nke ụwa si Canary Islands fega na, mgbe ọ rụsịrị na Nouakchott, gaa n'ihu na njem ya site na mpaghara Africa. Akwụkwọ ozi a ga-achikota ọrụ emere na Mauritania. Fatimetou Mint Abdel Malick, onye isi oche nke mpaghara Nouakchott natara ndị isi otu Machị. Mgbe e mesịrị, e nwere ihe zutere na
Akwụkwọ akụkọ March - World 8
30 / 10 / 2019 30 / 10 / 2019 site Antonio Gancedo
2 World March gara n'ihu na-aga n'okirikiri Africa na, n'akụkụ ụwa ọzọ, March ga-aga n'ihu n'ọtụtụ ihe. Akwukwo ozi a gosiputara transverseness nke omume anyi. Ọ na-eme na kansụl, ala, okpukperechi ụka, okpukpe dị iche iche dịka “Oke Osimiri Mediterenian nke